ဂျပန်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆာမူရိုင်းပြတိုက်။ ကျိုတိုနှင့်အိုဆာကာအတွက်ဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ပြတိုက် - Samurai Ninja Museum
ဂျပန်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆာမူရိုင်းပြတိုက်။ ကျိုတိုနှင့်အိုဆာကာအတွက်ဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ပြတိုက်
သငျသညျဂျပန်အတွက်ဆာမူရိုင်းပြတိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုပါက, ဒီဟာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည် !!!
ဟဲအိအန်ကာလ, မာကူကာလ, Muromachi ကာလ, အဲဒိုကာလနှင့်မေဂျီကာလ: အဆိုပါဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ကိုပြတိုက်5ခေတ်ပြသထားတယ်။ ဧည့်သည်တစ်ဦးဆာမူရိုင်းသံချပ်ကာဝတ်နိုင်ပါသည်, ဧည့်သည်များမှာလည်းအမှန်တကယ်ဆာမူရိုင်းဓားကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်ဦးဆာမူရိုင်းပြပွဲ, Ninja ကို, ဆာမူရိုင်းဓားကိုပြပွဲနှင့်ဆူမိုနပန်းသမားနပန်းပြပွဲရှိပါသည်။ တူညီသောအဆောက်အဦ၌ဂျပန်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါဆာမူရိုင်းပြတိုက်၏တည်နေရာကျိုတိုမြို့အလယ်၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါအိုဆာကာနျဌာနခှဲ Dotonbori ဝေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ကိုပြတိုက်အလယ်ခေတ်ကြိမ်ကနေစိတ်ဝင်စားဖို့အပိုငျးအရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဧည့်သည်များဧည့်လမ်းညွှန်၏အကူအညီနှင့်အတူပြတိုက်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ပုံ ယူ. ကိုလည်းဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ဖို့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆာမူရိုင်းနောက်ခံကားရှိပါတယ်။ အဆိုပါပြတိုက်ကို 10 AM ကနေ7နာရီမှဖွင့်လှစ်သည်။ သင်သည်ဤ website တွင်လက်မှတ်များဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
အဆိုပါဆာမူရိုင်းကာလအတွက်စတင် “ဟဲအိအန်ကာလ။ ” ဒီ Taira အဆွေအမျိုးနှင့် Minamoto နွယ်စုဧကရာဇ်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ သို့သော်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြား agaisnt တိုက်ခိုက်နေတော့တာပဲ။ အဆိုပါ Genpei စစ်ပွဲပြီးနောက်, Minamoto နွယ်စုဂျပန်အုပ်ချုပ်စတင်ခဲ့သည်။ ဧကရာဇ်မင်းတန်ခိုးမရှိရှိခဲ့ပါတယ်။
မာကူကာလ (~ 1333 1185)
အဆိုပါ Minamoto နွယ်စုမာကူသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူတို့ကစစ်တပ်အစိုးရထူထောင်နှင့်ခေါင်းဆောင်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည် “Shogun ။ ” Budhism ပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1274 ခုနှစ်, Kubilai Khan ကနှင့်လီးဂျပန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကဆာမူရိုင်းအားဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဂိုလီးကိုထပ် 1281 ခုနှစ်တွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့နှင့်ဆာမူရိုင်းနောက်တဖန်သူတို့ကိုလုပ်ကြံ။ နှစ်ဦးစလုံးကျူးကျော်ခုနှစ်, လေပြင်းတိုက်ခတ်ရှိခဲ့သည်။ ဘာသာရေးကလူ “KamiKaze ။ ” ဟုအဆိုပါလေတိုက်နှုန်းကိုခေါ်
Muromachi ကာလ (~ 1573 1336)
အနှစ် 50 မှနျဂိုကျူးကျော်ပြီးနောက်အချို့သောမျိုးနွယ်စုများဧကရာဇ်ပြန်ချင်တယ်။ အဲဒီမှာတစ်ခုလူထုအုံကြွမှုခဲ့ပေမယ့် unsuccesful ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမြို့တော်ကိုပြန်ကျိုတိုမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါခေတ်သစ်စတင်ခဲ့သည်။ ရွှေနန်းတော်နှင့် Ryoanji ဗိမာနျတျောကဒီခေတ်ကာလအတွင်းတည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသည်။ 1467 ခုနှစ်, ရှိုးဂန်းတိုင်းပြည်အပေါ်ကိုယူရန်မသားခဲ့သညျ။ အတော်များများက “daimyo” တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတော့တာပဲ။ တိုင်းပြည်ပရမ်းပတာ၌ရှိ၏။ နောက်တဖန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတိုက်ခိုက်နေသေးငယ်တဲ့ပြည်နယ်များများစွာရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါခေတ်သစ်ကို “Sengoku ကာလ။ ” ဟုခေါ်ခဲ့သည်
Azuchi Momoyama ကာလ (~ 1603 1573)
နောက်ဆုံးတော့ဂျပန်အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးမှစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ရက်စက်စစ်သည်တော်သူ ODA Nobunaga ။ သူဟာ 1573 ခုနှစ်ကျိုတို controling စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဤခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစဖြစ်ပါသည်။ သူ Honnoji ဗိမာနျတျောမှာ 1582 ခုနှစ်ကသူ၏အနီးကပ်ယေဘုယျအားဖြင့်သေဆုံးခဲ့ရသည်။ Honnoji ဗိမာနျတျောဘေးမှာကျိုတိုအတွက်ဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ပြတိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်အတွက်မျိုးနွယ်စုများအကြားအချို့လွဲနေတုန်းပဲရှိခဲ့သည်။ 1600 ခုနှစ်တွင်ဂျပန်အရှေ့ဘက်၏အဆွေအမျိုးနှင့်ဂျပန်များ၏အနောက်ဘက်၏အဆွေအမျိုးအသီးအသီးအခြားအတိုက်ကြ၏။ အဆိုပါ Sekigahara တိုက်ပွဲ: ဒီဂျပန်ရဲ့သမိုင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးစစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုကူဂါဝါအိအဲယာဆု၏အရှေ့စစ်တပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အဲဒိုကာလ (~ 1868 1603)
တိုကူဂါဝါတိုကျိုမြို့တော်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တိုကျိုအာရှအတွက်အကြီးမားဆုံးမြို့တဖြစ်လာခဲ့သည်။ အလွန်တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိခဲ့သည်။ မွန်းတည့်ဂျပန်ဝင်နိုင်နှင့်မွန်းတည်ဂျပန်စွန့်ခွာနိုင်ဘူး။ ဧကရာဇ်မင်းကိုလေးစားပေမယ့်ရှိုးဂန်းတိုင်းပြည်အစစ်အမှန်အုပ်စိုးသောမင်းကိုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရှိုးဂန်းမှအခွန်ပေးဆောင်တဲ့သူ 100 ကျော် daimyo ရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို daimyo ဆာမူရိုင်းစစ်သူရဲရာပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလယ်သမားများ daimyo ဖို့အားလုံးကိုဆန်ကိုပေး၏။ အဲဒိုကာလအတွင်းတိုကျိုမှာရှိတဲ့ဂျပန်လူမျိုး၏ 90% ကိုဖတ်ပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။
– ဆာမူရိုင်းက “မာစတာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတဦးတည်း။ ” ကိုဆိုလိုသည် အဆိုပါဆာမူရိုင်းစစ်သူရဲများမှာသော်လည်း, စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစစ်သည်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်သည်တော်များအတွက်ဂျပန်စကားလုံး “senshi ။ ” ဖြစ်ပါတယ်
– သူတို့သာ5နှစ်သမီးအရွယ်သောအခါအဆိုပါဆာမူရိုင်းယောက်ျားလေးများကိုမှန်ကန်ဆာမူရိုင်းဓားပေးထားခဲ့ကြသည်။
– သာဆာမူရိုင်း2ဓားကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
– သာဆာမူရိုင်း harakiri လုပ်ပေးနိုင်ဘူး။
– သာဆာမူရိုင်းနှင့်သံဃာတော်များ Zen ဥယျာဉ်ထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
– အဆိုပါဆာမူရိုင်းကဗျာ, ပန်းပွင့်အစီအစဉ်နှင့်စာပေ၌ကောင်းသောခဲ့ကြသည်။
– အဆိုပါဆာမူရိုင်းက “wabi-sabi” အသက်စတိုင်ခဲ့: ရိုးရှင်းသောအဟောင်းအမှုအရာကိုပိုမိုလှပသောဖြစ်ကြသည်။
– တစ်ဦးဆာမူရိုင်း၏ပျမ်းမျှလစာဆန်3တန်ချိန်ဟာတစ်နှစ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး Ninja ၏ဘဝ
– ထိုစကားလုံး Ninja ကို၏အဓိပ္ပာယ်ကို “အခက်အခဲတည်သူတဦးတည်း၏။ ”
– ဂျပန်နင်ဂျာခုနှစ်တွင်ကိုခေါ်ခံရဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည် “shinobi ။ ”
IGA အဆွေအမျိုးနှင့် Koka နွယ်စု: – ဂျပန်၌သာ2Ninja ကိုအဆွေအမျိုးအလိုက်ရှိခဲ့သည်။
– Ninja ကိုလယ်သမားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကဆာမူရိုင်းများကဲ့သို့အခွင့်ထူးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
– Ninja ကိုအနက်ရောင်မတ်မတ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့မတ်မတ်အပြာမှောင်မိုက်သို့မဟုတ်ပဲရိုးရှင်းတဲ့အရောင်များဖြစ်ခဲ့သည်။
– နင်ဂျာ 60 ကျော်ကီလိုဖြစ်လို့ယူဆတယ်မခံခဲ့ရပါ။
– Ninja ကိုပြေးမှာအလွန်ကောင်းသောခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအချို့နင်ဂျာတနေ့ 200 ကီလိုမီတာကို run နိုင်ကြောင်းအစီရင်ခံသည်။
– Ninja ကိုသူလျှိုတစ်ဦးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကသူရဲမရှိကြပေ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ပြတိုက်မှာဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေ့စဉ်ဖွင့်လှစ်ကြသည်။
Categoriesဆာမူရိုင်းနှင့် Ninja (Burmese) TagsBushi အဘိဓါန်, bushido, Ninja ကိုပြတိုက်, shinobi, som ဆာမူရိုင်း, ကျိုတို, ဂျပန်အတွက်လုပ်ဖို့အမှုအရာ, ဆာမူရိုင်းစစ်သူရဲ, ဆာမူရိုင်းပြတိုက်, ဆာမူရိုင်းအချက်အလက်များဆာမူရိုင်းသမိုင်း, ဆာမူရိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကို, တိုကျို
Previous PostPrevious Японы Шилдэг Самурай музей Киото, Осака дахь Самурай, Нинжа музей
Next PostNext जापानको सर्वश्रेष्ठ समुराई संग्रहालय। क्योटो र ओसाकामा सामुराई र निन्जा संग्रहालय